Ansu Fati oo shaaciyay qofka uu i hibeeyay goolkiisii ugu horreeyay ee qaranka Spain & sababta – Gool FM
(Spain) 07 Seb 2020. Waxaa wali la hadal hayaa goolkii uu xalay Ansu Fati u dhaliyay xulka qaranka Spain ciyaartii ay la ciyaareen dhiggooda Ukraine, kaasoo ahaa goolkii ugu horreeyay ee uu da’yarkan u dhaliyay xulkiisa.
Fati ayaa noqday xiddigii ugu da’da yaraa ee xulka La Roja gool u dhaliyay taariikhda, balse in xulka qaranka looga yeero markiisii ugu horreeyay waxay baajisay inuu ka qayb galo xafladda dhalashada ee walaalkiisa.
Kaddib markii uu dhaliyay goolkii saddexaad ee ciyaartii ay xulkiisa ku adkaadeen 4-0, weeraryahanka Barcelona ayaa ku hor dabaal dagay kaamirada TV-ga hortiisa si uu hambalyada dhalashada ula wadaago walaalkii.
Laacibkan ayaa shirkii jaraa’id ee ciyaarta kaddib sheegay inuu dabaal daggaas ugu talo galay walaalkiisa, maadaama uu xaadiri waayay xafladdiisa dhalashada kaddib markii uu xulka qaranka ugu yeeray Tababare Luis Enrique.
“Waxa uu iga dalbaday inaan isaga u hibeeyo haddii aan gool dhaliyo” ayuu yiri Ansu Fati oo ka hadlay goolkii uu u dhaliyay xulkiisa kulankii xalay.